I-7 ye-Automated Workflows eya kutshintsha umdlalo wakho wokuThengisa | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 10, 2021 Lwesine, Disemba 9, 2021 Chintan Jain
Ukuthengisa kunokuba nzima kuye nawuphi na umntu. Kuya kufuneka uphande abathengi ojolise kubo, uqhagamshelane nabo kumaqonga ahlukeneyo, ukhuthaze iimveliso zakho, emva koko ulandele de uvale intengiso. Ekupheleni kosuku, kunokuziva ngathi ububaleka umdyarho.
Kodwa akufuneki ukuba ibe yoyikeka, vele uzenzele iinkqubo.
I-automation inceda amashishini amakhulu aqhubeke neemfuno zabathengi kwaye amashishini amancinci ahlala efanelekile kwaye ekhuphisana. Ke, ukuba awukayisebenzisi i-automation yentengiso, ngoku lixesha. Vumela isoftware ye-automation ithathele ingqalelo imisebenzi echitha ixesha ukuze ukwazi ukugxila kwimisebenzi ebalulekileyo.
Yintoni iMarketing Automation?
Ukuthengisa okuzenzekelayo kuthetha ukusebenzisa isoftware ukwenza imisebenzi yokuthengisa ngokuzenzekelayo. Imisebenzi emininzi ephindaphindwayo kwintengiso inokuzenzekela: ukuthunyelwa kwemidiya yoluntu, ukuthengisa nge-imeyile, iikhankaso zentengiso, kunye namaphulo e-drip.
Xa imisebenzi yokuthengisa izenzekelayo, isebe lokuthengisa liqhuba ngokufanelekileyo kwaye abathengisi banokubonelela ngamava omntu ngakumbi kubathengi. Ukuthengisa okuzenzekelayo kukhokelela ekunciphiseni i-overheads, imveliso ephezulu, kunye nokwanda kwentengiso. Ikwakwenza ukuba ukhulise ishishini lakho ngezixhobo ezimbalwa.
Nazi izibalo ezimbalwa ezibalulekileyo kwi-automation yokuthengisa.
75% kuzo zonke iinkampani zamkele i-automation yokuthengisa
websites 480,000 ngoku sebenzisa itekhnoloji yokuthengisa ezizenzekelayo
63% yabathengisi cwangcisa ukwandisa uhlahlo lwabiwo-mali lwabo oluzenzekelayo lokuthengisa
91% yabathengisi bakholelwa ukuba ukuthengisa okuzenzekelayo konyusa impumelelo yamaphulo okuthengisa kwi-intanethi
Ukuphumeza ukuthengisa okuzenzekelayo kukhokelela ekunyukeni kwe-451% kukhokelo olufanelekileyo-ngomndilili
Xa uthengisa ngokuzenzekelayo, uyakwazi ukujolisa abathengi ngokuthe ngqo, kwaye ibhajethi yakho yokuthengisa isetyenziswa ngobulumko nangempumelelo. I-automation yokuthengisa isebenza kwishishini ngalinye, kwaye nantsi ezinye iinkqubo zokuthengisa ezinokuthi zenziwe ngokuzenzekelayo ngesixhobo sokuhamba komsebenzi.
I-Workflow 1: IKhokelo yoLondolozo oluzenzekelayo
Ngokophando, i-50% yesikhokelo osivelisayo sifanelekile, abakakulungeli ukuthenga nantoni na okwangoku. Basenokuvuyiswa kukuba ukwazi ukuchonga amanqaku abo entlungu kwaye uvulekele ukufumana ulwazi oluninzi. Kodwa abakakulungeli ukuthenga kuwe. Ngapha koko, ziipesenti ezingama-25 kuphela ezikhokelayo ezilungele ukuthenga iimveliso zakho nangaliphi na ixesha, kwaye oko kunethemba.
Mhlawumbi ufumene ukhokelo ngeefomu zokungena kwi-intanethi, ukukhangela intengiso, okanye iqela lakho lokuthengisa lifumene amakhadi oshishino kumboniso worhwebo. Zininzi iindlela zokwenza izikhokelo, kodwa nantsi into: ngenxa yokuba abantu bakunike ulwazi lwabo akuthethi ukuba bazimisele ukukunika imali yabo.
Into ekhokelela ekufuneni ulwazi. Abafuni kukunika imali yabo ngaphambi kokuba bakulungele. Ke, into yokugqibela ekufuneka uyenzile kukubaxelela, "Heyi inkampani yethu ineemveliso ezintle, kutheni ungazithengi!"
Ukunyanzeliswa kokukhokela kukuvumela ukuba uhambise izikhokelo kuhambo lomthengi ngesantya sabo. Usebenzisana nabo, ufumane ukuthembela kwabo, uthengise iimveliso zakho, emva koko uvale intengiso. I-automation ikunceda uphuhlise kwaye ugcine ubudlelwane kunye namathemba kwaye ikhokele ngaphandle kwemizamo yokuthengisa enzima. Unxibelelana nabanethemba kunye nabathengi kulo lonke inqanaba lohambo lwabo lokuthenga.
Ukuhamba komsebenzi 2: I-imeyile yokuthengisa i-Automation
Ukuthengisa nge-imeyile kunceda abathengisi ukuba bakhe ubudlelwane kunye namathemba, abakhokelayo, abathengi abakhoyo, kunye nabathengi abadlulileyo. Kudala ithuba lokuba uthethe ngqo nabo ngexesha elibalungeleyo.
Inani labasebenzisi be-imeyile liqikelelwa ukufikelela Iibhiliyoni ezingama-4.6 ngowama-2025. Ngabasebenzisi abaninzi be-imeyile, kulula ukubona ukuba kutheni imbuyekezo kutyalo-mali oluvela kwintengiso ye-imeyile inkulu. Uphononongo lubonise ukuba i-$ 1 nganye echithwe kwintengiso ye-imeyile, imbuyekezo ephakathi yi-$ 42.
Kodwa ukuthengisa nge-imeyile kunokuziva ngathi yinkcitho yexesha kuba kuninzi ekufuneka kwenziwe: jonga amathemba, uzibandakanye nawo, uthengise iimveliso zakho, uthumele ii-imeyile kwaye ulandele. I-automation inokunceda apha ngokuzenzekela imisebenzi ephindaphindwayo ehambelana nolawulo lobudlelwane bomthengi, ukwenza intengiso ye-imeyile isebenze kakuhle.
Isixhobo se-imeyile yokuthengisa i-automation sinokuthumela ababhalisile abafanelekileyo, abantu, kunye nemiyalezo efike ngexesha. Isebenza ngasemva, ikuvumela ukuba usebenze kweminye imisebenzi ebalulekileyo. Ungathumela ii-imeyile ezenzelwe wena kumntu ngamnye, ukusuka kwiindwendwe ezintsha ukuphinda abathengi.
Ukuhamba komsebenzi 3: Imithombo yeendaba yokuThengisa
Kukho i-3.78 yezigidigidi zabasebenzisi beendaba zoluntu kwihlabathi jikelele, kwaye uninzi lwabo luchitha imizuzu engama-25 ukuya kwiiyure ezi-2 yonke imihla kumajelo asekuhlaleni. Yiyo loo nto abathengisi abaninzi besebenzisa imidiya yoluntu ukuthengisa iinkampani zabo.
Xa unxibelelana nabathengi kunye nethemba kwimidiya yoluntu, unokuthetha nabo ngexesha lokwenyani kwaye ufumane impendulo yabo. Phantse isiqingatha sabathengi base-US basebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukubuza malunga neemveliso kunye neenkonzo, ke ukuba nobukho obunamandla kwimidiya yoluntu kubaluleke kakhulu.
Kodwa akunakwenzeka ukuba uchithe imini yonke kumajelo asekuhlaleni, kwaye kulapho i-automation ingena khona. Ungasebenzisa isixhobo sokuthengisa imidiya yoluntu ukucwangcisa, ukunika ingxelo, kunye nokuqokelela imibono. Ezinye izixhobo ezizenzekelayo zinokubhala izithuba zemidiya yoluntu.
I-automation yentengiso yemidiya yoluntu ikhulula ixesha lakho, ikwenza ukwazi ukunxulumana nabalandeli bakho kwaye ubambe iincoko eziyinyani. Unokusebenzisa iingxelo ezenziweyo ukwenza isicwangciso malunga nokuba ungathumela ntoni kwaye nini.
Ukuhamba komsebenzi 4: I-SEM kunye noLawulo lwe-SEO
Mhlawumbi unamashumi okanye amakhulu abantu okhuphisana nabo, kwaye yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuthengisa kwiinjini zokukhangela. I-SEM (iNtengiso yeeNjini zokuThengisa) inokukhulisa ishishini lakho kwindawo yokuthengisa ekhuphisanayo.
I-SEO (i-Search Engine Optimization) ithetha ukuphucula iwebhusayithi yakho ukuphucula ukubonakala kwayo kuphando olufanelekileyo kwiinjini zokukhangela. Okukhona indawo yakho ibonakala kwiziphumo zophendlo, kokukhona amathuba akho okutsala abathengi abalindelekileyo kunye nabakhoyo kwishishini lakho. I-SEM yenza i-capitalisation kwi-keyword ejoliswe kuyo, ngelixa i-SEO inceda ukuguqula nokugcina izikhokelo eziveliswa ngamaqhinga e-SEM.
Xa u-automate SEM kunye ne-SEO, unciphisa inani lomsebenzi wezandla omele uwenze kwaye ukhawuleze imisebenzi edinayo. Ngelixa ungenako ukwenza ngokuzenzekelayo yonke inkqubo ye-SEM kunye ne-SEO, kukho imisebenzi onokuthi uyenze ngokuzenzekelayo ukunceda ukukhulisa ukusebenza kakuhle.
I-SEM kunye neenkqubo ze-SEO ezinokuthi zenziwe ngokuzenzekelayo zibandakanya ukuvelisa i-analytics yewebhu, ukubeka iliso ukukhankanywa kwe-brand kunye namakhonkco amatsha, ukucwangciswa kwesicwangciso somxholo, ukuhlalutya iifayile zelogi, isicwangciso segama elingundoqo, kunye nokwakhiwa kwekhonkco. Xa i-SEM kunye ne-SEO zidibene ngononophelo, zivelisa umkhankaso wokuthengisa wedijithali onamandla kunye neziphumo ezibonakalayo.
Ukuhamba komsebenzi 5: Ukuhamba koMxholo wokuThengisa
Yonke i-brand enkulu inento enye eyiqhubela phambili: ubutyebi bomxholo oxabisekileyo kunye nofanelekileyo odibanisa nabaphulaphuli bawo. Ukuthengiswa komxholo kudlala indima ephambili kwimikhankaso eyimpumelelo yokuthengisa idijithali.
Kodwa nantsi into. Kuphela i-54% yabathengisi be-B2B basebenzisa umxholo ukwakha ukunyaniseka kunye nabathengi babo abakhoyo. Abanye bazama nje ukuphumelela ishishini elitsha. Ungasiphazamisi, ukuphumelela ishishini elitsha akubi, kodwa uphando lubonisa ukuba i-71% yabathengi bacinywa ngumxholo obonakala ngathi yintengiso yokuthengisa. Ke, endaweni yokuchitha ixesha elininzi uthengisela abantu abalindelekileyo kunye nabathengi abakhoyo, into ekufuneka uyenzile kukuzibandakanya nabo.
Isixhobo esizenzekelayo sokuthengisa umxholo sinokuthi sizenzele kwaye silungelelanise imisebenzi yokuthengisa umxholo ophindaphindiweyo. Inceda ukuphucula ukusebenza kwesicwangciso sakho sokuthengisa umxholo. Unokwazi ukubona ngokulula iintsingiselo zamva nje kumxholo kwaye usebenzise isixhobo sokuvelisa umbono.
Ngesicwangciso esilungileyo sokuthengisa umxholo, uyakha ukuthembana nabaphulaphuli bakho, uqhagamshelane nethemba kunye nabathengi, uvelise izikhokelo, kwaye uphucule ukuguqulwa. Ukungaguquguquki komxholo kunceda inkampani yakho ukuba ithembeke ngakumbi, yakha ukuthembana kubathengi, kwaye yomeleza isidima sakho seshishini.
Ukuhamba komsebenzi 6: ULawulo lwePhulo leNtengiso
Ukuba inkampani yakho ifumana izikhokelo ezimbalwa kwaye intengiso ihlile, iphulo lokuthengisa linokusebenza ngokumangalisayo. Iphulo lokuthengisa elilungileyo linokubangela umdla omtsha kwishishini lakho kunye nokunyusa ukuthengisa. Nangona kunjalo, iphulo eliyimpumelelo kufuneka libe neziphumo ezinokulinganiswa-njengokonyuka kweentengiso okanye imibuzo emininzi yeshishini.
Ulawulo lwephulo lokuthengisa lubandakanya ukucwangcisa ngononophelo kunye nokwenza imisebenzi ejolise ekunikeni iziphumo ezincomekayo kushishino. Iqinisekisa ukuba iphulo liguqula iinjongo zenkampani zibe kujoliswe kuko okunokusetyenzwa ezinxulumene neemfuno zabathengi.
I-automation yolawulo lwephulo lokuthengisa yenza umsebenzi womthengisi ube lula. Umzekelo, umthengisi unokwenza i-automate lead flows. Xa ithemba lizalisa ifom, ulandelelwano lwemigudu yokuthengisa luyaqaliswa. Ii-imeyile zinokuthunyelwa ngokuzenzekelayo ukukhuthaza iintengiso, izicelo zeshishini, okanye ukucela iintengiso.
Ukuhamba komsebenzi 7: UCwangciso loMsitho noThengiso
Isiganeko sokuthengisa sithatha imveliso okanye inkonzo ngokuthe ngqo kumathemba kunye nabathengi abakhoyo. Inokunceda ukwandisa ukubonakala kwebhrendi ngaphambi, ngexesha, nasemva komsitho. Umsitho unokunceda inkampani ukuba ivelise izikhokelo kunye namathuba amatsha. Abathengisi banokunyusa imveliso ethile okanye uphawu lokunyusa ukwaneliseka kwabathengi ngokubanzi, ukubandakanyeka, kunye nokugcinwa.
Kodwa wonke umsitho wokuthengisa oyimpumelelo kufuneka ucwangciswe kwaye ucwangciswe kakuhle. Isixhobo sokuhamba komsebenzi sinokuvumela abathengisi ukuba benze ngokuzenzekelayo yonke inkqubo-ukusuka kubhaliso, ukunyuswa kwesiganeko, ukuya kwingxelo.
Xa usebenzisa iminyhadala njengendlela yokuthengisa, unikezela abathengi abanokubakho okokuqala kwintsebenziswano kunye nenkampani kwaye ubancede ukuba bazi ubuntu bayo, ukugxila, kunye nembono.
Ukuthengisa okuzenzekelayo kunempembelelo enkulu
Kwindawo yentengiso yehlabathi, kubalulekile ukuba ishishini lakho ligqame ngaphandle kwesihlwele. I-80% yabasebenzisi be-automation yokuthengisa xela ukunyuka ekufumaneni ilothe, kwaye amashishini amaninzi asebenzisa itekhnoloji ukwenza imizamo yabo yokuthengisa isebenze ngakumbi. Ukuzenzekela kunokunceda ukulawula yonke inkalo yephulo lakho lokuthengisa-ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, ukwenza yonke inkqubo ingabinamthungo kwaye ingabinangxaki.
tags: esizisebenzelayoi-email automationi-automation yesicwangciso somsithoukukhokela ukukhulisa automationukuzenzekela ngokuzenzekelayoizibalo ezizenzekelayo zokuthengisaizibalo ezizenzekelayo zokuthengisaiphulo lokuthengisa automationUkuhamba komsebenzi wentengisoUlawulo lwepkci-automation ye-injini yokukhangelai-automation ye-injini yokukhangelaUlawulo lwe-injini yokukhangelafuna ulawulo lokuthengisasemSEOi-automation ye-social media marketingmananiyintoni ukuthengisa okuzenzekelayo
UChintan Jain nguMlawuli oDibeneyo weNtengiso yeeMveliso e Kissflow Workflow, iqonga elimanyeneyo elenza ukuba imibutho ilawule zonke iintlobo zomsebenzi kwindawo enye. UChintan yingcali yezentengiso enesakhono ebhala kakhulu kwizihloko ezinjengobuchwephesha bendawo yokusebenza, ulawulo lomsebenzi, kunye nendawo yokusebenza yedijithali. Ukwanegalelo elibonakalayo kumashishini ahlukeneyo kunye namaqonga etekhnoloji.